म्याग्नेशियम लाभ - मद्दत MEHemp
म्याग्नेशियम4होth शरीरमा सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा खनिज, क्याल्शियम, पोटेशियम, र सोडियमको अनुसरण गर्दै। मानव शरीरमा करीव grams०-25०% सहको साथ करीव २ grams ग्राम हुन्छहड्डीमा राखिएको र बाँकी भित्र नरम ऊतक।
म्याग्नेसियम मानव शरीर को लागी एक धेरै महत्त्वपूर्ण खनिज हो। वास्तवमा, म्याग्नेशियमले 300०० भन्दा बढी कार्यहरूमा भूमिका खेल्छ हाम्रो जीउ। भर्खरको अनुसन्धान बीचको महत्त्वपूर्ण अन्तरक्रियामा केन्द्रित छ mस्वास्थ्यलाई बढावा दिन एग्नेसियम र भिटामिन डी।
यो सिफारिश गरिएको छ कि वयस्क पुरुषहरूले प्रति दिन -400००-420२० मिलीग्राम खपत गर्छन्, र 310 १००- 320२० मिलीमहिलाको लागि प्रति दिन ग्राम। अध्ययनहरूले पत्ता लगाएका छ कि प्राय: अमेरिकीहरूले पर्याप्त मात्रामा म्याग्नीशियम उनीहरूको आहार मार्फत पाउँदैनन्। यो छ सम्भव परिणाम आहार, मदिरा दुरुपयोग, दीर्घकालीन तनाव, मधुमेह, बान्ता, र पखाला सहित धेरै कारकहरू।
यो लेखले अपर्याप्त मात्रामा म्याग्नीशियम, म्याग्नीशियमको कमीको जोखिममा रहेका समूहहरू, र भिटामिन डी र म्याग्नीशियम बीचको अन्तरक्रियामा सम्भावित समस्याहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ।
समूह मैग्नीशियम अभावको जोखिममा
किdneys अपर्याप्त मैग्नीशियम सेवनfमा समायोजन गर्न भूमिका खेल्छवा छोटो अवधिमा व्यक्तिहरू नियमन गरेरम्याग्नेशियम पेशाब मार्फत बाहिर निकालियो। विशेष गरी, मिर्गौला पेशाबको माध्यमबाट म्याग्नीशियमको घाटा सीमित गर्नुहोस्, जुन शरीरमा म्याग्नेशियमको सबैभन्दा ठूलो नोक्सान हो। तर, यसको बाबजुद पनिमृगौलाको सकारात्मक कार्य, पीसमाजको आर्टिकुलर समूहहरू म्याग्नीशियमको अभावको जोखिममा छन्। यसमा ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगहरू भएका व्यक्तिहरू, टाइप २ मधुमेह भएका व्यक्तिहरू, वृद्ध वयस्कहरू र रक्सी निर्भरता सहितका मानिसहरू समावेश छन्।
म्याग्नीशियम कमीको लक्षण
सस्तोमा कम सेवन म्याग्नेशियमले बायोकेमिकल मार्गहरू परिवर्तन गर्दछ जुन बढाउन सक्छ को रोगहरु को जोखिम। यी दीर्घकालीन प्रभावहरूले प्रतिरक्षा प्रणालीको सामान्य कार्यलाई परिवर्तन गर्दछ र विभिन्न स्वास्थ्य अवस्था विकासको जोखिम बढाउन सक्छ। यो खण्ड मैग्नीशियमको कमीका लक्षणहरूमा केन्द्रित छ।
1. स्नायु क्रम्प्स र टिभीस
म्याग्नीशियमको कमीको एक लक्षण लक्षण मांसपेशियों को ऐंठन, कंप, र twitches अनुभव गर्दैछ। विज्ञहरू विश्वास गर्दछन् कि व्यक्तिले यी लक्षणहरूको अनुभव गर्नुको कारण के हो भने क्याल्शियमको अधिक मात्राले स्नायु कोषहरू प्रवेश गर्दछ, जसले मांसपेशिका स्नायुहरूलाई ओभरएक्साइट गर्छ (यद्यपि केही अवस्थामा यी प्रभावहरू अत्यधिक क्याफिन, तनाव, वा न्यूरोलजिकल बिरागा लगायत अन्य कारकहरूले गर्दा हुन सक्छ)। । म्याग्नेशियमले क्याल्शियमको स्तरलाई नियन्त्रण गर्न कार्य गर्दछ, र म्याग्नीशियमको अभाव स्नारोकेटि ner्ग स्नायु कोषमा क्याल्शियमको स्तरको कारण हो, जसको परिणामस्वरूप कुनै व्यक्तिलाई मांसपेशियोंको ऐंठन र जुम्लाहाटको अनुभव हुन्छ।
2. मांसपेशी कमजोरी र थकान
थकान शारीरिक र मानसिक थकावट सहित विभिन्न कारकका कारण हुन सक्छ, र प्राय: जसो व्यक्तिहरूको जीवनकाल भरि बिभिन्न समयका लागि प्राकृतिक अवस्था हो। यद्यपि लगातार थकान पनि मैग्नीशियमको कमीको लक्षण हुन सक्छ।
मायास्थेनिया, जुन मांसपेशीहरूको कमजोरी हो, म्याग्नीशियमको कमीको अर्को विशिष्ट संकेत हुन सक्छ। वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि म्यास्थेनियाको परिणाम मांसपेशी कोषहरूमा पोटेशियमको अभावबाट हुन्छ, जुन शरीरमा अपर्याप्त म्याग्नीशियमसँग सम्बन्धित अवस्था हो।
3. मानसिक विकारहरू
म्याग्नीशियमको कमीले मानसिक विकार पनि निम्त्याउन सक्छ। हल्का म्याग्नीशियमको अभावले उदासीनता निम्त्याउन सक्छ, जुन को एक राज्य हो मानसिक सुन्नता वा भावनात्मक प्रतिक्रियाको कमी। बढी गम्भीर को मामलाहरु म्याग्नीशियमको अभावले कोमा वा डेलीरियम हुन सक्छ। थप रूपमा, म्याग्नेशियमको कमी उदासीनताको जोखिमसँग जोडिएको छ। अनुसन्धान थप गर्न जारी छ को शरीरमा म्याग्नीशियमको स्तरसँग मानसिक विकारहरू जोड्ने प्रमाणको बढ्दो शरीर।
4. अनियमित हृदयघात
सबैभन्दा गम्भीर लक्षण मध्ये एक म्याग्नेशियम कमी अनियमित मुटुको धडकन हो, जो एरिथमिया को रूप मा परिचित छ। अधिकांश समय, लक्षणहरू of अतालता हल्का छन्। यद्यपि यसले मुटुको धड्कनहरू पनि निम्त्याउन सक्छ, जुन मुटुको धड्कन बीचको विराम हो। तर एरिथिमियामा सासको कमी, लाइटहेडनेस, बेहोशी वा छाती दुखाइका लक्षणहरू पनि सामेल हुन सक्छन्। एरिथमिया को गम्भीर मामलाहरु को जोखिम बढाउन सक्छ हृदय असफलता or झड्का। म्याग्नेशियमले शरीरमा पोटासियम नियमित गर्दछ, र मुटुको मांसपेशी कोषहरूको भित्र र बाहिर पोटाशियमको असंतुलन हो, जुन एरिटिमिया निम्त्याउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। म्याग्नेशियम एरिथमिया र अन्य हृदय अवस्था भएका बिरामीहरूको ईजेक्शनहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ, जुन तिनीहरूको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखाइएको छ।
विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि शरीरमा म्याग्नीशियमको अभावले फोक्सोको वायुमार्गको आवरणमा क्याल्सियम निक्षेप बढाउँदछ। यसले प्रभावकारी रूपमा वायुमार्ग प्रतिबन्ध गर्दछ, जसले सास फेर्न गाह्रो बनाउँछ। गम्भीर दमाका बिरामीहरू कम म्याग्नेशियमको कम स्तरको प्रदर्शन गर्न थाल्छन्, र सामान्यतया म्याग्नीशियमको स्तर दमको ब्यक्तिमा कम हुन्छ।सामान्य व्यक्तिलाई pared। साथै, लक्षणहरू घटाउन अक्सर दमको रोगीहरूलाई म्याग्नेशियम दिइन्छ।
अस्टियोपोरोसिस हड्डीको रोग हो जुन is शरीरको धेरै हड्डी हराउनेको परिणाम, धेरै सानो हड्डी बनाउने, वा यी दुवै कारकहरू। अस्टियोपोरोसिसको शाब्दिक अर्थ "झरझरा हड्डी" हो र विश्वव्यापी रूपमा धेरै व्यक्तिहरूको लागि गम्भीर खतरा हो, विशेष गरी बुढाका लागि। हड्डीहरू कमजोर हुन्छन् र खस्दाबाट फुट्न सक्छन्, वा ओस्टियोपोरोसिसको गम्भीर मामिलाहरूमा, छींकने वा साना नक्कलहरूले हड्डीहरू भाँच्न सक्छ।
म्याग्नेशियमको कमी अस्थिरोगको लागि जोखिमको कारक हो। जबकि मैग्नीशियमको अभावले हड्डीहरूलाई सीधा कमजोर पार्न सक्दछ, यसले रगतमा रहेको क्याल्सियमको स्तर पनि कम गर्दछ। क्याल्शियम हड्डीको मुख्य निर्माण ब्लक हो, र रगतमा कम क्याल्सियमको प्रभावले हड्डीहरूलाई कमजोर बनाउँछ।
प्रमाण माउन्टेन्स छ कि म्याग्नीशियम अभाव रक्तचाप बढाउन सक्छ, र उचाई को उच्च रक्तचापको जोखिम, जुन हृदय रोगको लागि महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो। परिणामहरू पुष्टि गर्न थप अध्ययन आवश्यक छ, तर प्रमाणहरूको बढ्दो शरीरले सुझाव दिन्छ कि म्याग्नीशियमको कमीले रक्तचाप बढाउन सक्छ, जुन बढ्छहृदय रोग को जोखिम ases।
भिटामिन डी- म्याग्नेशियम परस्पर निर्भरता
भिटामिन डी धेरै अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्न परिचित छ। यसले क्यान्सर र मधुमेहसँग जोडिएको जीन सहित सयौं मानव जीनहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। भिटामिन डीले हृदय रोग, मधुमेह, र क्यान्सर रोक्न मद्दत गर्दछ। भिटामिन डी, म्याग्नीशियमको साथ, प्रतिरक्षा प्रणालीको असंख्य कार्यहरू लाई असर गर्दछ।
जे होस्, भिटामिन डी का यी सबै आश्चर्यजनक लाभहरू शरीरमा म्याग्नीशियममा निर्भर हुन्छन्। यो तथ्यलाई कारण हो कि म्याग्नेशियम भिटामिन डीको समर्थनमा दुई मुख्य तरिकामा प्रयोग गरिन्छ। पहिले, बढेको भिटामिन डीले हड्डीहरू बनाउँछ, जसले म्याग्नेशियम खान्छ। दोस्रो, म्याग्नेशियम भिटामिन डी मेटाबोलिज गर्न आवश्यक छ म्याग्नीशियम बिना भिटामिन डीका फाइदाहरू महसुस गर्न सकिदैन किनकि यो यस्तो रूपमा रहन्छ जुन मानव शरीरको विभिन्न कार्यहरूद्वारा प्रयोग गर्न सकिदैन। तसर्थ, म्याग्नेशियम शरीरको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको लागि मात्र आवश्यक पर्दैन, तर पनि ti भिटामिन डी शरीर द्वारा एक उपयोगी रूप मा रूपान्तरण।
हाम्रो मानव स्वास्थ्यको प्रबर्द्धनको लागि चलिरहेको प्रयासहरूमा, helpmehemp.org तपाईंको म्याग्नीशियम आवश्यकताहरूको लागि समाधान प्रदान गर्दछ। माथिको मैग्नीशियमका फाइदाहरूको साथसाथै, हाम्रो क्षारीय म्याग्नेशियम स्प्रे म्याग्नीशियम क्लोराइडको प्रयोग मार्फत थप महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभहरू प्रदान गर्दछ। यसले हाइड्रोक्लोरिक एसिडको उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउँछ जसले भिटामिन र खनिजहरूको पाचन र अवशोषणलाई सुधार गर्दछ। थप रूपमा, हाम्रो क्षारीय म्याग्नेशियम स्प्रे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत गर्दछ, राम्रो निद्रा बढावा दिन्छ, र मानसिक र शारीरिक आराम दुवै लाई बढावा दिन्छ।